Feiliyundi Nzvimbo Yekutengesa - Dhizaini magazini
Nzvimbo Yekutengesa Basa rakanaka rekugadzira rinomutsa manzwiro evanhu. Iyo yekugadzira inosvetuka kunze kwechinyakare chinyakare memory uye inoisa chiitiko chitsva mune yakaisvonaka uye futuristic nzvimbo chimiro. Iyo inonyudza yezviitiko zvemamiriro ekunze inovakwa kuburikidza nekuisirwa nekuchenjera kwekuisa kwekushongedza kuisa, yakajeka kufamba kwenzvimbo uye yekushongedza nzvimbo yakarongedzwa nezvinhu nemavara. Kuve mairi hakusi kungodzokera kune zvakasikwa, asiwo rwendo runobatsira.
Zita rechirongwa : Feiliyundi, Vagadziri zita : Weimo Feng, Izita remutengi : MOD.
Nzvimbo Yekutengesa Weimo Feng Feiliyundi